၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သီအိုရီမှနွား Succumbs | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 4, 2007 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2016 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကွန်ရက်ရှိကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာသည်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည် - မကြာမီထွက်ပေါ်လာတော့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်လကစာဖတ်ခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဘလော့ဂ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ အကြောင်းအရာမှာယခုကျဆင်းနေသော်လည်းကျွန်ုပ်၏စိတ်သည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအကြောင်းအရာနှင့်အပြိုင်ပြေးနေသည်။ အကယ်၍ ၎င်းမလုံလောက်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးအပ်သော - Vontoo အတွက်နောက်ဆုံးစပွန်ဆာကိုပိတ်ထားလိုက်သည်။ ကျနော်တို့ပို့စ်အဘို့ Vontoo ၏တော်တော်လေးအေးမြသရုပ်ပြအလုပ်လုပ်!
ဒီတစ်ပတ်ငါပြီးသွားပြီ တိရစ်ာဆနျအုပျကစာအုပ်တစ်အုပ် Mark Earl ပါ။ ဒီနှစ်မှာတော့စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့အတူအချိန်ပိုပေးရမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖတ်လို့ရပြီးစျေးကွက်သမားတိုင်းကိုဒါကိုအကြံပေးချင်တယ်။
ကြှနျုပျ၏ရိုးသားသောထငျမွငျခကျြအရ, နွား နိုင် ယခုနှစ်ဖတ်ရန်အရေးအကြီးဆုံးစီးပွားရေးစာအုပ်ဖြစ်ခြင်းသည်ရိုက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် - မာ့ခ်သည်သူ့ကိုယ်ပိုင်သီအိုရီများနှင့်နိဂုံးချုပ်များကိုလက်လျှော့သည်ထင်သည် မာကုအဖြစ်ဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆက်သွယ်ရေးလေ့ကျင့်သူတစ် ဦး နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စားသုံးသူအပြုအမူများကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။
မာ့ခ်၏စာအုပ်ကိုဖတ်ရာတွင်မာ့ခ်သည်ဘာသာရေးနှင့်လက်ယာနိုင်ငံရေးအပေါ်အဆိုးမြင်အမြင်ရှိသည်ဟုသက်သေအထောက်အထားအချို့ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည်။ ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ရှောင်ကြဉ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအကြောင်းအရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မာ့ခ်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းခေါင်းစဉ်သည်နွားအုပ်နောက်ကွယ်တွင်ပိုမိုပုံစံပြုထားသောခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကိုမပြောနိုင်ပါ။ နက်ရှိုင်းသောအရာတစ်ခုစီကိုထိတွေ့မည့်အစားမာ့ခ်သည်အဆိုးမြင်မှတ်ချက်များကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး၎င်းကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျန်တဲ့စာအုပ်တွေအတွက်ဒီဟာရကိုငါအစာရှာဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ ဒါကကံဆိုးတာပဲ။ ငါစာအုပ်နဲ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်အချိန်ကုန်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုညွှန်ပြလိမ့်မယ်။ မာ့ခ်မှာမယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားလှတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရခဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေပြီးဒီနေရာမှာရိုက်ချက်တွေကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ရတယ်။
စာအုပ်၏ဒုတိယနိဂုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်များသည်စိတ်မချရသော (အကြီးအကျယ်ဆီလျှော်မှုမရှိလျှင်) မျက်မြင်သက်သေများဖြစ်သည်။ သို့သော်မာ့ခ်ကဤကောက်ချက်ကိုချမှတ်သည့်အခန်းတွင်သူသည်ဂျော့ဘုရ်ှ၏ 'စပ်စုသောဂျော့ခ်ျ' နှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲကောလိပ်သည်ဤနိုင်ငံ၏ဘိုးဘေးများကလူကြိုက်များသည့်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းသည်သမ္မတကိုအမြဲတမ်းအစဉ်မပြတ်မဲပေးရန်နှင့်မာ့ခ်၏စိတ်ဓာတ်နှင့်ဆက်နွှယ်သည့်အမူအကျင့်၊
အကယ်၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်သမ္မတဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်သည့်လူကြိုက်များသောရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရှိခဲ့ပါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၉၀% သည်ဝါရှင်တန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကသာမြို့ကြီးများ၏အကြီးဆုံးအာရုံစိုက်မှုကိုသာထားရှိမည်ဖြစ်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၉၀% မှာကျန်ရစ်မည်ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲကောလိပ်သည်မျှတမှုကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရသည်လူအများစုထက် ပို၍ အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြည်နယ်များကိုအာရုံစိုက်ရမည်။ အမှန်စင်စစ်ရွေးကောက်ပွဲသည်ဖလော်ရီဒါနှင့်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်များတွင်အနိုင်ရခဲ့သော်လည်းရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကောလိပ်မရှိပါကထိုပြည်နယ်များသည်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြောဆိုခွင့်မရှိခဲ့ပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ကိုယ်စားပြုမဲပေးမှုဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လူကြိုက်များမှုဟန်ချက်ညီမှုနှင့်လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်မှုရရန်အခွင့်အရေးပေးရုံသာမကလူတိုင်းပျော်ရွှင်မှုရရန်အခွင့်အရေးပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည် "အမေရိကန်အိပ်မက်" ကိုမည်သို့ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ကိုသူဆွေးနွေးခဲ့သည်ဆိုပါကမာ့ခ်၏စာအုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် လူ ဦး ရေထူထပ်သောဒေသများ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရောမချာ့ချ်ကသင်ပေးခဲ့တယ်။ ထိုအချိန်ကထိုအချိန်ကဘုံယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပြီးငြင်းပယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ယူပြီးသောအခါသိပ္ပံကိုပြန်လည်ရေးခဲ့သည်။
နိဂုံး ၄ သည် ပို၍ နှိမ့်ချမှုရှိခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းကိုစကားပြောခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ မာကုသည်အဘယ်ကြောင့်ကိုးကားခဲ့သနည်း ဘုရားရှိခိုးကြောငျး သူ့ခံစားချက်အတွက်? ၎င်းသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သည်ဟုအရေးပါသလား။ ယနေ့နှင့်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကချာ့ချ်များ၏တန်ဖိုးကိုအသိအမှတ်ပြုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်များသည်၎င်း၏အမှားများနှင့်မသိမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိကျောင်းများ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များကချာ့ချ်များကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိဉာဏ်အရှိဆုံးပညာရှင်များရေးသားသည့်အတိုင်းမှားယွင်းနေသောအရာများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသည်ကိုအနာဂတ်တွင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကပိုပြီးနှိမ့်ချဖြစ်သင့်သည်။
နိုင်ငံရေးနှင့်ပညာရေးနှစ်ခုလုံးတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်နားလည်မှုသည်ငါတို့၏နားလည်မှုဖြစ်သည်။ မာ့ခ်ကမှတ်ချက်ပေးသည်မှာရေနံလုပ်ငန်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုသောကြိုတင်နိဂုံးချုပ်ကောက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 'နွားများ' ကိုစာရင်းသွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့အများကြီးရှိပါတယ် သိပ္ပံအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်သံသယ ဒီမှာအားလုံးအမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဤနယ်ပယ်တစ်ခုစီ၏အကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုနောက်ကွယ်မှသိပ္ပံပညာကိုအမှန်တကယ်လေ့လာမည့်အစားဘက်လိုက်ခြင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မာ့ခ်သည်အခြားစာအုပ်များနှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ကြောင်းထပ်မံတွေ့ရှိရပြန်သည်။ သို့သော်မာ့ခ်သည်ထိုနယ်ပယ်တစ်ခုစီအပေါ် ပိုမို၍ တရားမျှတသောအမြင်ကိုရှုမြင်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
Tags: စာအုပ်ပွောငျးလဲတိရစ်ာဆနျအုပျနွားအပြုအမူနွားစိတ်ဓာတ်Earls markအစုလိုက်အပြုံလိုက်အပြုအမူ
WordPress: Google Analytics ဖြင့်ဆိုက်ကိုခြေရာခံ
နိုဝင်ဘာလ4ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 5:59 နာရီ
ဒီအချက်သုံးချက်ကို စဉ်းစားတဲ့အခါ စိတ်ကိုဖွင့်ထားပါ။ သုံးဦးစလုံးသည် နိုင်ငံရေးအရ စွဲချက်တင်ခံရပြီး ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကို မဖတ်တော့ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မမျှော်လင့်ပါဘူး!
အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ ပျက်ပြားသွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရှ်၏ ပရိသတ်တစ်ဦး မဟုတ်ပေ။ ဒီလိုမျိုး လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးရတဲ့အခါ အကြမ်းဖက်သမားတွေက တကယ်ပဲ အောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်လည်း စည်းစနစ်ကျသောဘာသာတရားကို နှစ်သက်သူမဟုတ်ပါ- ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကုန်ကျပြီး နိုင်ငံရေးလှည့်ဖြားနိုင်သော ကြီးမားသောချာ့ခ်ျများကို တောင်းဆိုသည့် သမ္မာကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်တည်းကို သင်တွေ့လိမ့်မည်မထင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ချာ့ခ်ျတွေက လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကြီးမားတဲ့ ခြားနားချက်တွေကို ဖန်တီးပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို လှူဒါန်းတဲ့ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ ကွာခြားချက်ကို ကိုယ်တွေ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမား မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အမှိုက်ပုံးတွေ ဖြည့်တာကို ရပ်ပြီး ငါတို့ဆီအတွက် တခြားနိုင်ငံတွေအပေါ် မူတည်နေတာ မြင်ချင်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကူညီပေးတာက အဲဒီအကြောင်းတရားတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အတွက် အဲဒီလမ်းကြောင်းကို မှီဝဲလေ့ရှိပါတယ်။
5:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 9, 05
အရမ်းကောင်းတယ် Doug ရေဒီယို/တီဗီ ဟောပြောချက်အချို့ကို နားမထောင်နိုင်တော့ဘဲ (ညာဘက်နှင့် ဘယ်ဘက်တွင်) b/c ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ နှစ်ဖက်စလုံးကို မကြည့်နိုင်တော့ပါ။ တွေးခေါ်မှုနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် သတင်းအချက်အလတ်များကို စုပ်ယူမှုဆီသို့ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကိုအခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော စိတ်ခံစားမှုများအပေါ်အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များဆီသို့ ခုန်တက်သွားသလိုပင်။ လူထုအမြင်မှာ ဘယ်သူမဆို လူထုအသံ၊ စာရေးဆရာတွေ၊ အယ်ဒီတာတွေ၊ သတင်းတွေ၊ ငါတို့အားလုံး၊ ဘလော့ဂ်တွေတောင်မှ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပိုပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ တင်ပြဖို့ လူထုအတွက် တာဝန်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ငါမင်းကိုအမြဲတမ်းသဘောမတူပေမယ့် မင်းဒါကိုကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်လို့ ငါအမြဲတမ်းခံစားရတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆက်ဖတ်တယ်။ . .
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်း မကြာသေးခင်ကမှ ကျွန်မ အဆက်မပြတ် အမှတ်ရနေမိတယ်၊ “အရာရာတိုင်းကို ထိန်းညှိပါ။ . ”
နိုဝင်ဘာလ4ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 10:49 နာရီ
Doug၊ အေးဆေးပဲနော်။ ဘာသာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအစွန်းအထင်းများမပါဘဲ အလားတူဖြစ်စဉ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရန်အတွက် James Surowiecki ၏ "The Wisdom of Crowds" ကို ကြည့်ရှုပါ။ ၎င်းသည် Herd ရရှိသည့်အရာနှင့် အတိအကျမဟုတ်သော “ခန့်မှန်းစျေးကွက်များ” ဆိုင်ရာ အစောပိုင်းစာအုပ်များထဲမှ တစ်အုပ်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းသည် ကျိန်းသေဆက်စပ်နေသည်။ အခြေခံအကျဆုံးအချက်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် “စျေးကွက်” ထူထောင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့အနိုင်ရမည်ဟု ထင်မြင်သူများအတွက် ရွေးချယ်စရာစာချုပ်များကို လူများထံတွင် “ဝယ်” ပေးနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ ရလဒ်က အနိုင်ရရင် လျော်ကြေးပေးရမယ့်ပုံစံ ရှိတယ်။ လူစုလူဝေးသည် တစ်ဦးချင်း ကျွမ်းကျင်သူ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ငယ်များထက် ပိုမိုထက်မြက်ပြီး စစ်တမ်းတစ်ခုထက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော စွမ်းအားရှိသည်။ Univ မှာ လေ့လာစရာတစ်ခုရှိတယ်။ အိုင်အိုဝါက သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဒါကိုလုပ်ပေးပြီး ဘယ်လောက်နောက်ကြောင်းပြန်သွားလဲ မေ့သွားပေမယ့် သူတို့ လွတ်သွားတယ်လို့ မထင်မိသေးပါဘူး။